La Taliyaha Jose Mourinho Oo Kashifay Sir Qarsooneyd Oo La Xiriirta Xiisihii Real Madrid Ee Paul Pogba Ee Xagaagan - Gool24.Net
La Taliyaha Jose Mourinho Oo Kashifay Sir Qarsooneyd Oo La Xiriirta Xiisihii Real Madrid Ee Paul Pogba Ee Xagaagan
September 8, 2019 Saed Balaleti
La taliyihii ugu dhawaa Jose Mourinho ayaa shaaca ka qaaday in xiisaha Real Madird ee Paul Pogba inay kaliya aheyd mid xayaysiin ah oo ay kooxda dooneysay inay ku jeediso taageerayaasheeda.
Xiddiga Manchester United Paul Pogba ayaa fasax ku jooga magaalada Faransiiska ee St Tropez isaga iyo saaxiibtiisa iyo wiilkooda yar ka dib markii uu dhaawac uga bxay xulka qaranka Faransiiska.
Waxa uu si weyn u doonayay inuu ka tago Old Trafford xagaagii oo dhan iyadoo si xoogan loola xiriirinayay kooxda Los Blancos.
Real Madrid marnaba dhab kama aheyn inay xagaagan la wareegto xiddiga Faransiiska sababtoo ah waxay ogaayeen inuu dhibaato ka dhex abuurayo qolkooda labiska sida uu sheegay Eladio Parames oo ahaa la taliyaha Jose Mourinho.
Parames oo la soo shaqeeyay Mourinho waayihiisa tababarenimo oo dhan oo ay ku jirto waqti uu joogay Bernabeu ayaa yiri:
“Xiisaha Real Madrid ma aheyn mid dhab ah.
“Runta maalin ayay soo bixi doontaa, xaqiiqdii ma aysan xiiseyneynin inay soo iibsadaan ciyaaryahanka, been ayay ka aheyd.
“Sababta waxay tahay inay ogaadeen in haddii ay soo iibsadaan ay la micno noqoneyso inuu dhibaato ka abuurayo qolka labiska.
“Waana sababta aysan saxaafada horteeda uga qiranin inay xiiseynayaan, waxay taas bedelkeeda u ogalaadeen warbaahinta inay taageerayaasha ku quudiyaan warkaan iyadoo wargeysyada ay joornaalo badan iibiyeen halka idaacadaha iyo telefishinada ay ka dhaxleen dad badan oo daawada ama dhageysta.”
Parames ayaa arintaan ku sheegay maqaal uu ku qoray wargeyska Portugal ka soo baxa ee Record.
Maqaal uu hore u qoray waxa uu sheegay in Jose Mourinho uusan ka danbeynin saxiixii Paul Pogba ee Manchester United.
Waxa uu sheegay in madaxda Old Trafford inay ogaasadeen inay soo iibiyaan xiddiga khadka dhexe sababtoo ah dhaqaalaha uu kooxda soo gelinayo, lacagta 89ka milyan ginni ee ay ka soo bixiyeen waxay u soo noqotay kaliya lix bilood ah.